Tetezana Sarasin any Phuket ~ Journey-Assist - Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Tetezana Sarasin any Phuket
Tetezana Sarasin, Phuket
Famaritana ny tetezana Sarasin any Phuket
Tetezana Sarasin eo amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary ao amin'ny tetezana Sarasin
Famerenana tetezana Sarasin (Tripadvisor.com)
Tetezana Sarasin (tetezana Sarasin). Overview
Phuket dia tsy nosy iray foana. Tamin'izay fotoana izay dia tafiditra tao amin'ny tanibe Thailand, ny fanaovana kafe mahazatra. Saingy tsy nanam-pitiavana io toe-javatra io, ary teo ambany fitarihan'ny orthmus izay mampifandray an'i Phuket sy Thailand dia nipoaka tsikelikely, ary nanomboka tamin'izay dia nosy i Phuket.
Taty aoriana, ho an'ny fifandraisan'ny fitaterana, dia ilaina ny manamboatra tetezana amin'ny alàlan'ny tery, ary ny tetezana Sarasin dia lasa tetezana io. Nomena anarana ny Praiminisitra Thailand Phot Sarasin.
Ny tetezana Sarasin misy halavany 500m (eo ho eo) dia naorina tamin'ny 1967 ary nanomboka teo nampifandray an'i Phuket ho any amin'ny tanibe Thailand.
Izany no mahaliana. Tantara mikasika ny tetezana Sarasin
Ilay tetezana dia fantatra koa hoe ny tetezana fitiavana sy fahafatesana. Raha nisy lehilahy avy amin'ny fianakaviana sahirana iray, Dan, dia raiki-pitia tamin'ny tovovavy Gue avy amin'ny fianakaviana manankarena iray ary izy koa dia tia azy. Nanandrana nahazo fitahiana avy amin'ny ray aman-dreniny izy ireo ho amin'ny fanambadiana, saingy noraran'ny rainy tsy hifankahita izy ireo. Avy eo i Dan dia nangalatra an'i Gyu ary nanolo-kevitra izy ireo fa raha tsy afaka miaraka izy ireo dia miara-mivory any an-danitra.
Izy ireo dia namatotra ny tenany tamin'ny tadivavarana ary nirohotra nankany amin'ny maelstrom.
Tamin'ny taona 80 dia noforonina miorina amin'ny zava-misy marina antsoina hoe: "Sarasin Bridge of Love".
Raha tsiahivina dia somary kely loatra ity tetezana ity noho ny fitomboan'ny fiara. Tamin'ny taona 2011, nisy tetezana hafa natsangana teo akaikin'i Sarasin (Si Songthon), ary i Sarasin dia natao mpandeha an-tongotra fotsiny. Misy fitaovana vita amin'ny sehatra iray koa, mijoro eo, afaka mahita mazava tsara ny Bay Phang Ga ianao. Manakaiky ny dian'i Sarasin, misy ny trano fisakafoanana manompo ny hazan-dranomasina faran'izay tsara indrindra. Ary ho an'ny sasany, ny hoe tsy lavitra ny tetezana any amin'ny tanibe, misy ny tsena kely izay ahafahanao mividy trondro maina, foza ary anana môtô mora indrindra any Thailand (5 baht). 🙂
Avy amin'ity tetezana ity dia mamatsy fomba fijery mahafinaritra ny tery, ary avy eo dia misy mpizahantany marobe foana.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/UDSDXbPKXL4MXLGx5
Tetezana Sarasin eo amin'ny sarintany
Tetezana Sarasin (tetezana Sarasin). Sary sy horonan-tsary
Famerenana tetezana Sarasin (Tripadvisor.ru)
Toy ny tetezana ilay tetezana io. Amiko manokana aloha dia tsy mbola mazava amiko ny hoe "mahaliana" ao. Ny fomba fijery dia mahazatra. Ary ho ahy, tsy ny mahasarika olona any Thailand no mila misarika. Fa ny tsiron'ny tsirony, mazava ho azy 😉